CNC Single Spindle Single Control Hank Iji cone Cotton naịlọn asọfe Machine - China CNC Single Spindle Single Control Hank Ka Cone Cotton Nylon Winding Machine Nye,Factory -FEIHU
Hank ka igwe igwe igwe mkpuchi igwe
Otu igwe eji akpụ igwe na igwe na - achapu igwe
24(6 spindles / otu), 48, 96 (Nhọrọ)
Otu akụkụ ma ọ bụ akụkụ abụọ
220V 50HZ otu oge (Nhọrọ)
500-600m / min(Speed ​​mgbanwe)
Max. yarn n'obosara
ewepụghị bobbin Φ 80mm×220mm
205kg / otu
A: Ihe mgbaru ọsọ anyị bụ Good,mma, kacha mma, mgbe ka o zuru ike. & Anyị na-ejere nzube bụ na-agbalị kasị mma anyị na-eme ka ndị ahịa afọ ojuju. Professional otu ga-edozi nsogbu ọ bụla ị na-zutere n'oge dum ịzụta ọganihu.
A: Seaworthy mbupụ plywood mgbe mbukota ma ọ bụ dị ka gị arịrịọ.
Previous : Ugboro abụọ Side Hank Iji cone asọfe Machine
Osote : Electric ndepụta Hank Iji cone Chemical Fiber Silk Yarn asọfe Machine